शक्तिशाली स्मरण शक्ति – Rajdhani Daily
शक्तिशाली स्मरण शक्ति
इन्द्रीय अर्थात् आखा, नाक, कान, जिब्रो तथा छालामार्फत अवचेतन मन अर्थात् मेमोरी बैंकमा संग्रह हुने गर्छन् । यसरी मेमोरी बैंकमा संग्रह भएका कुरालाई चेतन मनले स्मृतिमा ल्याउने कार्य गर्छ, जसलाई स्मरण शक्ति भन्ने गरिन्छ । स्मरण ती कुराको हुन्छ, जुन कुरा पञ्च ज्ञानेन्द्रीयमार्फत् मेमोरी बैंकमा संग्रह भएका हुन्छन् ।
मेमोरी बैंक भन्नाले मस्तिष्कको कुनै एक निश्चित ठाउ होइन, डाटा संकलित हुने मस्तिष्कको समष्टिगत भाग हो । यहा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने मानिसको स्मरण शक्ति सञ्चालन तथा नियमनका लागि मस्तिष्कका विभिन्न प्रणाली तथा भागको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । डाटा मस्तिष्कको कुनै एक भागमा संग्रह नभएर मस्तिष्कको चारैतर्फ छरिएर रहेको हुन्छ । जस्तो कि प्रायः मोटर मेमोरी मोटर प्रोसेसिङ भागमा, श्रव्य मेमोरी बाया“ मस्तिष्कको नियोकोर्टेक्समा, दृश्य मेमोरी दाया“ नियोकोर्टेक्समा तथा काइनेस्थेटिक मेमोरी कोर्टेक्सको बाहिर, सेरेबेलममा भण्डारण हुन्छ ।
मस्तिष्कमा डाटा संग्रह गर्नका लागि मस्तिष्कका विभिन्न भागको सक्रिय सहभागिता हुुने भए तापनि लिम्बिक प्रणाली तथा नियोकोर्टेक्सको केन्द्रिय भूमिका रहन्छ । त्यो किनभने लिम्बिक प्रणालीले डाटालाई दीर्घकालीन मेमोरीमा भण्डार गर्न पठाउने कार्य गर्छ ।
औसत रूपमा मानिसको मस्तिष्क शक्ति तथा डाटा स्टोर गर्ने क्षमता उस्तैउस्तै हुन्छ । यदि कुनै डाटा मानिसको मेमारी बैंकमा स्टोर हुन्छ भने बिर्सने रोग वा अन्य रोगको कारणबाहेक, त्यो डाटा बिर्सिंदैन । मेमोरी बैंकमा स्टोर भएका डाटालाई तपाईं बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्नुहुदैन ।
लिम्बिक प्रणाली, जसलाई भावनात्मक मस्तिष्क पनि भनिन्छ, यसको प्रमुख कार्य भनेको डाटा मूल्यवान् छन् कि छैनन् भन्ने निर्णय गर्ने पनि हो । त्यसैले लिम्बिक प्रणालीको सम्र्पकमा आएका डाटालाई नियोकर्टेसमा भण्डारण गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न लिम्बिक प्रणालीले नियोकर्टेक्सस“ग निरन्तर संवाद स्थापित गर्दछ ।
यस कार्यमा हिप्पोक्याम्पस तथा एमिग्डेलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हिप्पोक्याम्पसले अभावनात्मक सूचना तथा एमिग्डेलाले भावनात्मक सूचनाका बारेमा निर्णय गर्दछन् । त्यसैले लिम्बिक प्रणालीका यी दुई भाग हिप्पोक्याम्पस र एमिग्डेलास“ग सूचना काटछाँट गर्ने योग्यता भएन भने नया सूचना दीर्घकालीन भण्डारणमा पुग्न सक्दैनन् । ठीक यही कुुरा अल्जाइमरका रोगी तथा पाको उमेरका कारण हुने स्मरणशक्तिको कमीमा लागू हुन्छ । त्यो किनभने यस्ता मानिसको हिप्पोक्याम्पीले डाटालाई मेमोरी बैंकमा पठाउने आफ्नो जैविक Ôमता घुमाउ“दै गएको हुन्छ ।
औसत रूपमा मानिसको मस्तिष्क शक्ति तथा डाटा स्टोर गर्ने क्षमता उस्तैउस्तै हुन्छ । यदि कुनै डाटा मानिसको मेमारी बैंकमा स्टोर हुन्छ भने बिर्सने रोग वा अन्य रोगको कारणबाहेक, त्यो डाटा बिर्सिंदैन । मेमोरी बैंकमा स्टोर भएका डाटालाई तपाईं बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्नुहुदैन । के तपाईंले आफ्नो नाम बिर्सन सक्नुहुन्छ ? कदापि सक्नुहु“दैन । किनकि सानैदेखि नै तपाईंको नाम मेमोरी बैंकमा छ र बारम्बार प्रयोगमा आइरहेको छ । तर, मेमोरी बैंकमा संग्रह भएका यस्ता सबै कुरा चाहेका बेला तुरुन्त स्मृतिमा आउ“छन् भन्ने छैन । आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्छन् । चाहेको बेलामा याद नआएर पछि याद आउन पनि सक्छन् ।
जस्तो कि दुईचार दिन यता तपाईंले स्कुलकलेज वा अफिस जा“दा आउ“दा बाटोमा अनेक घर देख्नुभयो, पसल देख्नुभयो, होर्डिंग बोर्ड देख्नुभयो, मानिस आवतजावत गरेको देख्नुभयो, कार, बस, ट्रक, साइकल, मोटरसाइकल, अटोरेक्सा, रेक्सा आदि गुडेको देख्नुभयो, मानिस बोलेको, हा“सेको, गाडी कराएको, कुकुर भुकेका अनेक आवाज सुन्नुभयो । तपाईंलाई अहिले यस्ता कुनकुन करा याद छ ? लगभग कुनै कुरा पनि याद छैन । मस्तिष्कमा जोड लगाएर याद गर्न खोज्नुभयो भने मुस्किलले मुठीभरका कुरा याद हुनेछन् । याद नहुन पनि सक्छन् । त्यो किनभने तपाईंको चेतनमनलाई बाटोमा देखिएका यस्ता कमन कुराप्रति कुनै चासो थिएन । र, जति पनि बाटोमा देखेका तथा सुनेका कुरा थिए, ती चेतन रूपमा अवचेतनमा प्रवेश भएका थिएनन् ।
तर, तपाईले बाटोमा ट्राफिक जाम गर्नेगरी बसको एक बडेमानको सा“ढे देख्नुभएको थियो भने वा मानिसको भीडमा एकदम अग्लो र मोटो डरलाग्दो मानिस देख्नुभएको थियो भने पक्कै पनि त्यो तपाईंलाई याद आउ“छ । यदि बाटोमा कुनै महिला कुक्काइकुक्काइ रोइरहेकी थिइन् भने त्यो पनि तपाईंलाई पक्का याद आउ“छ । यदि तपाईं क्रिकेटका खेलाडी वा क्रिकेटप्रेमी हुनुहुन्छ भने बाटोमा क्रिकेटको ब्याट समाएर हिँडेको केटो याद आउन सक्दछ ।
तर, तपाईंस“गै हि“डेको तपाईंको साथीलाई त्यो याद नआउन सक्दछ । यहा“ उल्लेखनीय कुरा के हो भने यसरी यस्ता कुरा याद आउनुको कारण हो, विषयले ध्यान खिच्नु र चेतन रूपमा त्यो विषय मेमोरी बैंकमा संग्रह हुनु । यस तथ्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यदि कुनै पनि कुरा चेतन रूपमा मेमोरी बैंकमा संग्रह हुन्छन् भने ती कुरा सजिलै स्मरणमा आउ“छन् । यो नै स्मरणशक्ति शक्तिशाली बनाउने वैज्ञानिक आधार हो । त्यसैले निम्न तीन सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउने हो भने जोसुकैले पनि आफ्नो स्मरणशक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छन् ।
मानिसको मनमस्तिष्कमा स्मरणशक्तिको संरचना यसरी हुन्छ कि असामान्य, अद्भूत, अनुपातहीनता, धेरै ठूला तथा धेरै साना कुराप्रति मानिसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ र चेतन मनले यस्ता कुरालाई मेमोरी बैंकमा देखिने गरी राख्दछ । यसरी राखिएका कुरा चेतन मनले चाहिएको बेलामा सजिलै बाहिर निकाल्न सक्दछ । स्कुलकलेज वा अफिस जा“दा वा घर फर्किंदा देखिएका अनगिन्ती कुरामध्ये बडेमानको सा“ढे वा निकै अग्लो र मोटो डरलाग्दो मानिस याद आउनुको कारण पनि यही हो ।
अतः असामान्य, अद्भूत, अनुपातहीनता, धेरै ठूला तथा धेरै साना कुरा याद गर्न सजिलो हुने ह“ुदा कुनै पनि याद गर्नु पर्ने कुराको आकार, प्रकार तथा रूपरंगलाई धेरै ठूलो तथा धेरै सानो, असामान्य र अद्भुत बनाएर तथा एकअर्कोलाई अचम्मस“ग जोडेर सजिलै याद राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि बाघ र टोपी शब्द याद राख्नु छ भने बाघले बढेमानको टोपी लगाएको कल्पना गर्ने हो भने यो कुरा सधैं याद रहिरहन्छ ।
मानिसको स्मरण शक्ति भावनाबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मन छुने अति राम्रो भावना वा अति खराब भावना मेमोरी बैंकमा राम्रोसँग स्टोर हुन्छ । त्यसैले त मानिसलाई अति गर्मी वा अति सर्दी, अति मान वा अति अपमान, अति सुख वा अति दुःखस“ग सम्बन्धित भावानात्मक कुरा सजिलै याद रहन्छ । स्कुलका दिनमा अनगिन्ती पुरस्कार पाएको दिन वा शिक्षकले गाली गरेको वा सजाय दिएको गरेको दिन कुनै विद्यार्थीले साहेदै बिर्सिन्छन् । स्मरणशक्तिको यस विज्ञानलाई विज्ञापनले खुब उपयोग गरिरहेको छ ।
तेस्रो सिद्धान्त स्मरण शक्तिको तेस्रो सिद्धान्त हो, लक्षित सोच । जब मानिसको चेतनमन लक्ष्यप्रति एकाग्र हुन्छ, तब चेतन मनले लक्ष्यस“ग सम्बन्धित कुरालाई ग्रहण गरी मेमोरी बैंकमा पठाउ“छ । तर, अन्य विषयलाई वास्तै गर्दैन । क्रिकेट खेलाडी वा क्रिकेटप्रेमीलाई क्रिकेटको ब्याट समाएर हि“डेको व्यक्ति याद आउनु र अन्य व्यक्तिलाई त्यो याद नआउनुको कारण पनि यही हो ।
अतः यी तीन सिद्धान्तलाई अलगअलग वा एकआपसमा मिलाएर व्यवहारमा ल्याउने हो भने निश्चित रूपमा मानिसको स्मरण शक्ति शक्तिशाली हुन्छ । शक्तिशाली स्मरणशक्तिले नै मानिसलाई सफल बनाउ“छ ।
(लेखक मनोविद् तथा मेमारी ल्याब प्रमुख हुन् ।)
काठमाण्डौ । यो महिनाको सांगीतिक कार्यक्रम ‘पलेँटी शृङ्खला’ मा दार्जि्लिङ र सिक्किमको संगम हुने भएको छ । यसका निम्ति दार्जि्लिङबाट संगीतकार शान्ति ठटाल आफ्नो टीमका साथ काठमाण्डौ आइपुगेकी छिन् । उनले गा...